अकबरे रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुन्छ, | RatoTara.com Websoft University
अकबरे रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुन्छ,
तेजेन्द्र भण्डारी– स्वतन्त्र पत्रकार–
बिराटनगर, साउन ३२ गते । रातो तारा डट कम,कृषि समचार, चिल्लो पिरो कम गर्नुहोला भनेर चिकित्सकले भन्ने गर्नुहुन्छ । तर तपाई हामीलाई यो जानकारी हुन जरुरीछ की चिकित्सकको रोजाई र स्वास्थ्य क्षेत्रले नै प्रमाणित गरेको कुरा यो छ की अकबरे खुर्सानी भने मानिसका लागि अति नै उपयोगी हो । जुन तपाई हाम्रै घरमा पाइने डल्ले अर्थात रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।
डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधि समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाइने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुग्ने बताइएको छ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीको अन्य फाइदाहरू पनि छन् । मोटोपन घटाउछ ।
रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । पिसावको बिरामीलाई लाभदायक हुन्छ । हाडजोर्नी लगायतका दुखाइ घटाउ
छ । विशेष गरेर अकबरे खुसार्नी हालेर बनाइएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ । थकाइ पनि मेटाउछ ।
अकबरे आकासे जिरे र तरकारी खाने जातिका खोर्सानी हुन्छन । यि सबै प्रकारका खोर्सानीहरु मानिको भान्सामा नभइनहुने सामाग्री हुन । सबै जतीका खोर्साहरुले मानव सरिरलाई फुर्ति राख्नुका साथै रोगहरु संग लड्ने क्षमताको बिकास गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने खोर्सानी आफैमा औसधीय गुणले भरिपुण रहेको हुन्छ ।
अकबरे खुर्सानी खेती गर्ने तरिका,
खुर्सानीको उत्पत्ति मध्य अमेरीकाबाट भएको भन्नेअनुमानछ । नेपालमा २०–२५ खालका पिरो,भेडेखुर्सानी र अकबरे खुर्सानी पाईन्छन्। त्यस मध्ये पूर्वी नेपालमा अकबरे खुर्सानी पाईन्छन्।भने कही कही नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा पनि यसको खेती गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यभर यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी अकबरे खुर्सानी पूर्वी पहाडमध्ये पनि इलाम र धनकुटामा बढी खेती गरेको पाइन्छ । पूर्वी नेपालमा पाइने ६–७ जातका अकबरे खुर्सानी मध्ये आकार रङ्गमा हेर्दा ठूलो देखिने, सानो डल्लो, सानोगोलो, लाम्चो, ठूलोगोलो, लाम्चो (बास्नादार) तथा चिप्लो डल्लो (पिरो नहुने) र उल्जे पोटिलो रङ्गका आधारमा पनि गाढा रातो, कलेजी रातो तथा
रातो रङ्गहरुमा पाईन्छ । तर ठूलो गोलो लाम्चो (बास्नादार) जातको अकबरे निकै पिरो र प्रख्यात सबैले मनपराउने जात हो । सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा डडेल्धुरा जिल्लाको रुपाल क्षेत्रमा अकबरे खुर्सानीको खेती गरेको पाइन्छ । हाल तरकारी जर्मप्लाजम सम्बर्धन तथा तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र डडेल्धुरामा यसको जातीय अध्ययन सम्बर्धन गरी कृषकहरुमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
अकबरे वा राङ्गे खुर्सानी पहिले मङ्गोल जातीका मानिसहरुले मात्र खाने गरेका थिए भने हाल आएर अन्य जातिका मानिसहरुले पनि खाने गरेका छन्। अकबरे खुर्सानी ग्याष्ट्रिक र अल्सरका रोगीहरुले समेत औषधीको रुपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
अकबरे खुर्सानी खासगरी मसला अचार बनाउन उपयोग गरेको पाइन्छ ।अकबरे नियमित खाँदा भोक लाग्ने, खाना रुची हुने र थकाइ समेत मेट्ने गरेको पनि उपयोग गर्नेहरुबाट व्यक्त गरेको पाईन्छ । पाकेको अकबरे खुर्सानीलाई हल्का हल्का सुकाई सुल तोरीको तेल वा पकाएको खाने नुन वा भिनेगरमा डुबाएर टाइट विर्को लगाई राखेमा दुई वर्षसम्म खान सकिन्छ । साथै विभिन्न अचार उद्योगहरुले समेतअकबरेको पेष्ट बनाई प्रयोग गर्ने क्रम शुरु भएको छ ।
साधरणतया गोडमेल खेती जस्तै हावापानी यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि यसको खेती उच्च पहाडदेखि गर्मी हावापानी भएको तराईमा समेत सजिलै खेती गर्न सकिन्छ ।यसका लागि साधारणतया दिनको तापक्रम २२–२५ डिग्री से। र रातीको तापक्रम १५–२० डि।से। उपयुक्त हुन्छ । तथापी त्यसभन्दा घटी वा बढीमा पनि उतपादन गर्न सकिन्छ । तर सेपिलो तथा पानी जम्ने स्थान र बढी आद्रता भएको ठाउँमा भने उत्पादन गर्न धेरै कठिन हुन्छ ।
वर्षमा २ पटक नर्सरी राख्न सकिन्छ अगैटे आश्विन, कार्तिक, र पछौटे माघ, फाल्गुण,। अकबरे खुर्सानीको ब्याड राख्दा राम्रो र नयाँ बोटबाट राम्रा खाले फलहरु छनौट गर्ने र राम्ररी सुकाई दल निकाली आश्विनदेखि मंसिरसम्ममा प्लाष्टिक टनेल बनाई दल राख्नुपर्छ ।
जमिनको तयारी जमिनको छनौट गर्दा पानी नजम्ने ठाउँको माटोलाई ३–४ पटक खनजोत गरी माटो बुरबुराउँदो बनाउनु पर्दछ । त्यसपछि एकभाग जङ्गलको माटो, एकभाग पाकेको गोबरमल र एकभाग बालुवा चिम्टाईलो माटोमा मिसाई १ मिटर चौडाई र लम्बाई आवश्यकता अनुसार हुनेगरी ९वर्षादमा १० ईन्च र हिउँदमा ६ इन्चको उचाई हुने गरी डयाङ्ग बनाउने ।
नर्सरीमा बीउ रोप्नुअघि निम्न अनुसार मल तथा औषधी प्रयोग गर्नु पर्छ । ‘ क रोपनी जमिनको लागि जम्मा ६ वर्गमिटरको नर्सरीको आवश्यक पर्छ । माटो उपचार गर्न फ्युराडन वा डर्सवान २५ ग्राम, डी।ए।पी। २०० ग्राम, पोटास १०० ग्राम, कृषि चुन १०० ग्राम उक्त मलहरु तयारीमाटोमा राम्ररी मिसाई १–२ दिन जति सुकेको परालले छोपी सिंचाई गर्ने ।
बीउ छर्ने र बेर्ना उमार्ने तरिका,
बीउ छर्ने र बेर्ना उमार्ने तरिकाको तयारी जमिनमा चौडाइ पट्टिबाट ४ ईन्चको फरकमा लाईन कोरी आधा ईन्च गहिरो कुलेसो बगाई १ ईन्च फरकमा १÷१ दाग बीउ खसाल्ने ।उक्त बीउ हल्का बालुवा, खरानी वा जङ्गलको माटोले छोपी सुकेको पराल÷झारले छोप्ने माटोको अवस्था हेरी सिँचाई गर्ने ।
तर बढी चिसोपन भएमा बीउहरु कुहीनेहुँदा पानी जम्न दिनु हुँदैन । बिरुवा उम्रिएपछि छापो झिकिदिने र हरेक सात दिनको फरकमा आवश्यकता अनुसार ढुसीनासक किटनासक विषादी छर्ने।
यसरी बिरुवा अगौटे हो भने ३÷४ महिना र पछौटे हो भने १÷२ महिनामा बेर्ना तयार हुन्छ । यदि बेर्ना कमजोर पहेंलो भएमा बेर्नामा नै भिटामीन, मल्टिप्लेक्स, भेजिमेक्स आदि लगायत युरिया २ ग्राम प्रति लि। पानीमा स्प्रे गर्ने ।
बिरुवा लगाउने तरिका,
राम्ररी खेत तयार गरीसकेपछि बहुवर्षिय रूपमा लाइनदेखि लाइनको दुरी ९० से।मी। र बिरुवादेखि बिरुवाको दुरी ६० से।मी।, वर्षेवाली ६०÷६० र वषन्ते ६०÷४५ से।मी। कायम गरी प्रति बोटमा २ के।जी। सम्म कम्पोष्ट मल, ५ ग्राम डि।ए।पी।, पोटास, कृषि चुन र कीराको प्रकोप हुने भएमा केही किटनासक विषादी राखी लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
अकबरे खुर्सानी लगाउँदा अरु खुर्सानीभन्दा पृथक दुरीमा लगाउनु पर्छ । नत्र भने परागसेचन भई गुणस्तरमा कमी आउँछ ।
यदि सिधै खेतमा मलखाद राखि खेती गर्ने हो भने प्रति रोपनी डि.ए.पी. १६ के.जी. पोटास १० के.जी., कृषि चुन १० के.जी. गोबरमल ३० डोको, मल्टिप्लेक्ज २ के.जी. युरिया ८ के.जी. र फ्युराडन÷डर्सवान १ के.जी.चाहिन्छ जसमध्ये डि.ए.पी., पोटास र कृषि चुनलाई २ भाग गरी सबै गोठमेल फ्युराडनरडर्सवान आदि एकमुष्ठ माटोमा राख्ने बाँकी आधा भाग दानमल, पोटास, कृषिचुनसँग ८ के.जी. युरिया २ के.जी. मल्टिप्लेक्सलाई ४ भाग गरीरोपेको १५ दिनको फरकमा ४ पटक प्रयोग गर्ने ।
जर्खरायको बिरुवा वेलुकीपख केहि वइलाएपछि मात्र तयारी खाल्डोमा रोपेमा राम्रो हुन्छ । साथै जराहरु नखल्बलिने गरी राम्ररी थिचेर हिउँदमा वरीपरि सानो खाल्डोको आकार बनाइदिने यदि सुख्खा हुन्छ भने फेदमा सोतर परालको छापो दिनु राम्रो हुन्छ ।
सिँचाई र गोडमेल,
निकासको राम्रो व्यवस्था मिलाई वर्षादमा ६–१२ इन्चसम्म ड्याङ्गको उचाई राख्नु पर्छ । बिरुवा सारेको १०–१५ देखि २०–२५ दिनसम्म माटोको अवस्था हेरी खुकुलो पार्ने झारपात हटाउने गोडाई हरेक टिपाई पछि गर्नै
रैटुनवाली ९बहुवर्षिय० लिने हो भने प्रशस्त गोडमेल प्रयोग गर्ने काँटछाँट गर्ने ९बोटको तल्लो भागका बाक्ला, पहेंला, नचाहिने मुना हटाइ दिने० र पहिलो वर्षको फल टिपेपछि बोटलाई गोडमेल गर्ने र हिउँदमा तुषारोबाट जोगाउन पराल आदिको छाप्रो दिने यसरी काँटछाट गोडमेल गरी अर्को सालको फल चाँडै लिन सकिन्छ । यस्तो बाली लिन उच्च र मध्य पहाडमा सम्भव छ ।
डढुवा र ढुसीबाट हुने रोग,
पातमा डढेजस्तो लक्षण देखिन्छ । सुरुमा पानीले भिजेजस्तो हल्का खैरो भई पछि गाडा खैरो वा कालो रङ्गमापरिणतहुन्छ । अनुकुल वातावरणमा त्यस्ता थोप्लाहरु वृद्धि भई बोटलाई डढाई दिन्छ । ओसिलो अवस्थामा फलको तल्लो सतहमा सेतो ढुसी देखिन्छ । फलमा खैरो कालो दागहरु देखा पर्दछन्। बेर्नामा डाँठ कुहिएको लक्षण देखापर्छ ।
बोटको टुप्पा माथिबाट सुक्दै आउँछ । यसले गर्दा पुरै हाँगा सुकेर मर्दछ । बोटको डाँठहरुमा काला काला स–साना गिर्खाहरु देखिन्छन्। विस्तारै तलतिर असर गर्दै जान्छ र फल कम लाग्छ । अर्को किसमको फलमा काला दागहरु लागि फल सड्छ । यस्ता दागहरुमा थुप्रै काला गिर्खाहरु देखिन्छन्।
रोगी फलका बोटहरुबाट बीउ नराख्ने, क्याप्टन, धानुटान विषादिले बीउ उपचार गर्ने । खेत सफा राख्न, रोग लागेका पुराना बोटहरु जलाई नष्ट गर्ने । रोगको लक्षण देखापर्नासाथ कपर अक्सिक्लोराईड, ब्लाईटक्स ५० वा मेल्कोजेब, डाइथेन एम. ४५र३ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई ७र७ दिनको फरकमा ३ पटक छर्कने ।
ब्याक्टेरियाबाट हुने ओइलाउने रोग,
सोलानेसी परिवार बाहेक अन्य बालीसँग घुम्ती बालीलगाउने । रोग अवरोधक जात लगाउने । फमार्लिन १० एम.एल. प्रतिवर्गमिटरमा माटोको उपचार गर्ने र १० ग्राम फोरेट राखी प्लाष्टिकले ३ दिनसम्म छोपीदिने चैत्र वैशाख घाममा खेत जोतेर छोड्ने र जमीनमा सोतर झारपात राखी जलाई दिने ।
मोज्याक भाईरस रोग,
यो रोग खुर्सानीको लागि निकै हानिकारक मानिन्छ । यो रोग नर्सरीबाटै पनि शुरु हुन सक्छ । पात पहेंलो र गुज्मुज्ज परेको पात बटारीएको, बिग्रिएको, बोट वृद्धि राम्रो हुँदैन र फल कम लाग्छ ।
यो रोग किराको माध्यमबाट चाँडै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दछ । यस्तो रोग कहिले काहीँ सूक्ष्म खाद्य तत्वको कमिले पनि मिल्दो जुल्दो देखिन्छ र यसलाई चिन्नको लागि प्राविधिकको सल्लाह लिनु पर्ने हुन्छ ।
सेतो धुले रोग,
क्याप्टान वा थिराम २.५ प्रतिकिलो बीउ उपचार गर्ने । क्याप्टान वा थिराम २.५ ग्राम÷लिटर पानीमा नर्सरीमा छर्ने ।
मुख्य मुख्य किराहरु र तिनको रोकथाम,
यो एकप्रकारको मसिनो कीरा हो । माउ र बच्चाले कोत्रेर घाउ बनाई निस्केको रस चुस्छन्। कोत्रेको ठाउँमा खैरा धब्बाहरु देखिन्छन्। पातलाई धर्का पारेको ठाउँमा नियालेर हेर्दा मात्र किरा देखिन्छ । यसले एक बिरुवाबाट अर्कोमा रोग सार्ने काम पनि गर्छ ।
यो किरालाई खुम्ले वा ढुकुवा कीरा पनि भनिन्छ । भरखर सारेका बिरुवाका फेद काटेर लार्भा अवस्थाका किराहरुले नोक्सान गर्दछ । यो माटो मुनी बस्दछ । यो किरा वयस्क अवस्थामा कालो÷खैरो रङ्गको पुतली बन्छ ।
अघिल्लो पखेटामा चन्द्राकार र पछिल्लो पखेटाहरु सेता र मैला सेता बुट्टाहरु देखिन्छन्। लार्भा अवस्थामा ध्वाँसे वा पाङ्गो माटो रङ्गको करीब ४०-४५ मि.मि. लामो जिउमा अस्पष्ट धर्साहरु हुँदा गुजुल्किने खालका हुन्छन्।
रोप्नु वा बेर्नासँग क्लाराडेन ५५ धुलोले प्रतिरोपनी १ किलोको दरले उपचार गर्ने । बेर्ना सारीसकेर यो किरा देखिएमा माथि लेखीएको विषादी उही दरले माटोको सतहमा छर्कने वा मालाथियन वा सुमिथायन प्रतिलिटर पानीमा २ एम।एल।को झोल बनाई प्रत्येक बोट मुनीको माटो ७÷८ से।मी।को गोलाईको क्षेत्रफलमा राम्ररी भिज्ने गरी उपचार गर्ने । फेद काटीएर ढलेका बोटहरु नजिकको माटो मुनीबाट संकलन गरि नास्ने । गोठेमल वा कम्पोष्टमल पाकेको मात्र प्रयोग गर्ने ।
फल टिप्ने ,
खुर्सानीको फल टिप्ने एकै पटक परिपक्व नहुने भएकोले फल टिप्न शुरु गरेपछि २–४ महिना सम्म लगातार टिपिरहन सकिन्छ । एकपटक टिपिसकेपछि कम्तिमा १०–५ दिन सम्म पुनः फल टिप्नु हुँदैन र फेरी तयार हुन्छ ।
अकबरेको हकमा प्रति रोपनी ५०० देखि ८०० कि.ग्रा.उत्पादन हुन्छ र प्रति के.जी. २००–३५० सम्ममा विक्री हुनेगरेको पाईएको छ । प्रति रोपनी ३००० देखि ७००० लगानी गर्दा १ लाख देखी ३ लाख सम्म लिनसकिने देखिन्छ ।
खुर्सानीको बजार व्यवस्थापन,
खुर्सानी ठिकसँग समयमै टिपेर लामो दुरीमा पठाउन चोया वा प्लाष्टिकको क्रेट वा टोकरीमा राखी पठाउन एक बास्केटमा २०–३० के.जी. भन्दा बढी नराखी पठाउनु पर्छ । ज्यादा पाकेको र चिसो मिसाउनु हुँदैन । मूल्य निर्धारण समय अनुसार फरक हुने भएपनि वैशाख जेष्ठ र असोज कार्तिक महिनामा बढी मूल्यमा किनबेच भएको पाईन्छ ।
अकबरे खुर्सानीको सुकेको भन्दापाकेको तर न सुकाएकोले राम्रो बजार मुल्य पाउँछ । हरियो काँचो फलमा भन्दा पाकेको रातो फलमा पौष्टिक तत्वहरु बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ । (यो कृषि समचारबाट लिएको हो ।)